Macluumaadka ku jira cadastre - Geofumadas
Xogta ku jirta cadawga
Qodobka tirada badan ee cadawga waa arrin su'aalo badan, sababtu ma ahan faa'iido-darro, laakiin sidoo kale sii jiritaanka xogta. Haddii aan sameynay jimicsi ba'an (iyo sidoo kale cirridka madaxiisa :)), waxa laga yaabaa in "dhammaan" data waa mid waxtar leh si degdeg ah ama goor dambe, laakiin ujeedooyin ku ool ah, qaar badan oo data kuwanu waa culays in jiritaanka in muddo dhexdhexaad ah in la tuuraa lahaa qabashadooda ama update. Marka uu qof doonayo inuu sameeyo cadastre "midab kala duwan", Waa inaad isweydiisaa waxyaabaha sida:
Yaa la tashanaya macluumaadka?
Waa maxay heerka saxsanaanta la filayo?
Yaa cusbooneysiin doona xogta?
Imisa ayaa la cusbooneysiinayaa?
Waxaa macquul ah in la ogaado in dhammaan macluumaadka faylka cadastu ay tahay "lama huraan" midka ugu dhow, laakiin qaar ka mid ah isticmaalka guud ee "kuwa kale" (ma ahan cadastre) inay la tashadaan laakiin marna ma cusbooneysiin. Waxaan u wici karnaa xogtan tiro badan ujeedada guud. Sidoo kale waxaa jira cadaymo muujinaya in dalka aan loo hagaajin lahaa, oo aysan aheyn inay laakiin sababta oo ah waxay noqon karin ama ma jirtaa xarun kale oo la hagaajiyo xaaladda (ama danta), in kasta oo xogta, kuwaas oo loo baahan yahay laga bilaabo wakhtiga update uusan ku xirnaan kartaa dalka, waa in loo tixgeliyo midka labaad ama isticmaalka gaarka ah. Ilaa xad in "ma loo baahan yahay" data la yareeyo hana ka mid ah mabaadi'da in initiative Xoojiyaan ah ayaa ka soo kabsaday, kuwaas oo uu dhigayaa in macluumaadka waa in lagu soo galeen hal mar oo keliya oo duurka ku, maamulka xogta noqon doontaa mid ka waara.
Habka ugu xiisaha leh ee loo kala qaado xogta waxay ku saleysan tahay xiriirka ay la leeyihiin hay'adaha ku lugta leh, sida Waaxda Dawlad Goboleedka, Cadaaladda Qaranka, Diiwaangelinta Dhulka, Xafiisyada Qorsheynta, iwm. Inta badan isbeddeladan sida waafaqsan xeerka dal kasta, laakiin waa muhiim in la xasuusto in cadeygu uu diiwaangeliyo "xaqiiqooyinka" iyo dhinac kasta oo aan "la samayn" waxay noqon kartaa masuuliyada kale oo kale, sidoo kale in la kala saaro xogta la qabtay goobta, iyo kuwa noqon doona geedi socodka dambe.
Lemmen way kala tagtaa macluumaadka, laga soo xigtey seddexda ugu weyn ee cadawga: Walax, Mawduuc iyo Xaq. Ujeedooyinka waxbarashada awgood ayaan u yeeray Saameynta iyo Hawlgallada tirooyinka xiriirka, (badanaaba ka kooban xogta laga helay falanqaynta kaddib) si layligu u fududahay inaad xasuusnaato:
Derecho (Xiriirka ka dhexeeya mawduuca iyo walxaha)
Afarsamo (Xiriirka ka dhexeeya shayga iyo midig)
TFaa'idada (Xiriirka ka dhexeeya mawduuca iyo midigta)
SMawduuca (Shakhsiyaadka, dabiiciga ama sharciga)
Walax, tani waa matalida xaqiiqda la ogaan karo ee heerarka maabka ama dukumiintiyada. Halkan waxay u muuqdaan:
Qorshaha, oo laga yaabo in uu noqdo mid hooseeya, sawir badan, xarun diiwaangashan iyo adeegga adeegga (oo laga wadaago kondominium), laakiin sida qaanuunku leeyahay joomatari oo ku xiran xogta. Xaqiijinta waa su'aasha ah udub dhexaadka cadawga iyo aragti dheer.
Dhismaha, oo ay ku jiri karaan dhismo, qalab go'an, hagaajin iyo xitaa hantida aan la sheegin. Xaaladda miyiga, waxay sidoo kale noqon doontaa horumar joogto ah sida dalagyada.
Sidoo kale heerka this hantida waxaa laga yaabaa in jirin document georeferenciado xaalad (sida warqadda dhaarta) sida dhibic (sida dhul ama dhibic textoparcela) iyo baastada (sida maps CAD aan isku dhafaya geodatabase).
Mawduuca, tani waa matalida dadka, waxayna noqon kartaa dad dabiici ah, oo aan dabiiciga ahayn (sida sharci ahaan) oo laga yaabo inay yeelan karaan kooxo.
Xaq, tani waa xidhiidhka u dhexeeya dadka (maaddooyinka) iyo alaabta (walxaha). Halkan waxaa lagu dari karaa oo kaliya ma aha xuquuqda dhabta ah ee diiwaan gashan ee xaqiiqada ah laakiin sidoo kale kuwa xaqiiqda ah, laakiin taasi waxay ka tarjumaysaa xiriirka lahaanshaha, lahaanshaha ama xaqa saxda ah.
Saameynta, waa tallaabooyin saameyn ku yeellanaya ama xaddidaya xuquuqda isticmaalka, domainka, degista, isticmaalka ama u wareejinta sheyga. Waa wax la mid ah sharciga, laakiin waa faahfaahin dheeraad ah oo ah in nidaamyada diiwaan-gelinta ay ku dambeeyaan inay bixiyaan magacyo badan (sida qoraallo yar) sababtoo ah maaha karti-xirfadeed, ama ugu yaraan saxsanaanta. Tani waxay noqon kartaa tixraac dokumenti ah, laakiin guud ahaan waxay ka billaabanayaan mowqifka xaddiga ah ee saameeya qorshaha, mid sharciga dadweynaha ama mid gaar ah; sida tusaale ahaan:
A line voltage sare, taas oo xayiray isticmaalka ama qolka, laakiin ma domain
Tareenka dhulka hoostiisa ah, oo ka soo baxa dhismooyin badan, ayaa sidoo kale dalbaday caddaynta 3D, marka hantidu ku taal waddo weyn.
Nidaam lagu xakameynayo ciribtirka ceelasha, oo xaddidaya isticmaalka dhulka hoostiisa ujeedada ka saarista biyaha.
Goob degaan ah oo ku xiran daadad, aag la ilaaliyo, jid-u-habboon oo iwm.
Guud ahaan saameynaha waa ku-meel-gaar ah ama waxay bedeli kartaa saameynteeda waqti ka waqti; tusaale ahaan:
Boorsada waxaa laga yaabaa in ay ku jirto dabeecadda sharciga ah ee ejidal; Ujeedooyinka loo yaqaan "ejido", ayaa tilmaamaya kuwa bixiya shahaadada lahaanshaha, laakiin markii la diiwaangeliyo waxaa lagu daaweyn karaa sida gaarka loo leeyahay, inkastoo ay ku jiraan dabeecada ejidal. Ma aysan badalin gobolka saameynta, laakiin saameynta.
Sidoo kale waxyeelladu maaha in la sameeyo qaybo xafiis, haddii aanay muhiim ahayn; tusaale ahaan:
Boorso ayaa laga yaabaa in qayb ahaan ay saameeyeen xuduudda magaalooyinka, taas oo xaddidaysa isticmaalka qayb ahaan, laakiin uma baahna in la kala sooco; ilaa mooyee magaaladu ay saameyn ku leedahay cidda ruqsad u heysata gudaha ama dibadda.
Sidoo kale saameynta waa "xaqiiqda" inta aanay ku jirin nidaam khasab ah; tusaale ahaan:
Boorso qayb ahaan ka mid ah jidka loo maro ama meel la ilaaliyo. Kastuurku wuxuu leeyahay "waa sida tan", laakiin waxay ku xirantahay hay'ad kale si ay u go'aamiso talaabooyinka ujeeddooyinka ku-meel-gaarnimada.
Wareejinta, waa ficillo lagu sameeyey xaqiiqada la helay. Tani waxay noqon kartaa: qiyaasta, dhismaha, cusbooneysiinta, bedelka ama qiimeynta.
Macaamilka waa in la qabtaa oo lagu cusbooneysiiyaa hay'adaha ku habboon sharciga. Si aad u dhigto a
Qiimaynta Ma aha xaqiiqo, laakiin macaamil ganacsi, kaas oo la sameeyo wakhti cayiman, oo leh nidaam, kaas oo noqon doona mid ansax ah illaa iyo inta laga helayo casriyeynta qiimeyntaas. Hase yeeshee, ma aha caddaadinta cadawga (sida xaqiiqda guud) qiimeynta, laakiin macaamil ganacsi ama canshuur. Waxaa loola jeedaa, in ay tahay xog, isticmaalka maaliyadeed ama cilmibaarista qiimaha ka sarreeya; cusbooneysiinta waa in ay ahaataa mas'uuliyadda waaxda kale, xitaa iyada oo la keenayo qalabka cadawga.
Si aad qayb ahaan la xiro mawduuca on taas oo dib markaas, waxaan u qeexi karaan xogta "multifinalitarios ujeedada guud" waa in la yareeyo hoos timaad maamulka dalka, waana in lagu doonayeen inay la soocay ah "multifinalitarios isticmaalka gaar ah." Ilaa inta laga doonayo shuruudaha ugu hooseeya hababka aasaasiga ah ee cadowga: Maaliyadda, dhaqaalaha, sharciga iyo isticmaalka dhulka.
Post Previous«Previous Noolaynta nadaafada
Post Next Qiimaynta cadawgaNext »
2 Jawaab ayaa ku socota "Xogta Kastamka"
Sabela isagu wuxuu leeyahay:
Qoraalka xiisaha leh, xilligaan furitaanka dhammaan, macluumaadka oo idil waa in la heli karaa oo dhan oo si fiican u dheelitirnaa, in tartanka tartanka ee xogta baaba'aya, weli wakhti wali waa ...